I-Google Sheets: Isihleli se-Spredishithi esiku-Inthanethi | i-Google Workspace
Ngena ngemvume Iya ku-Sheets Zami-sheets for work
Yenza izinqumo eziqondiswa idatha, ku-Google Sheets
Sungula uphinde uhlanganyele kuma-spreadsheet aku-inthanethi ngesikhathi sangempela futhi kusukela kunoma iyiphi idivayisi.
Zami-sheets for work Iya ku-Sheets
Bona ukuthi ungenzani nge-Google Sheets
Hlanganyela kudatha, kusukela noma ikuphi
Sungula iqiniso eliyisisekelo ledatha ku-spreadsheet sakho esiku-inthanethi, ngokwabelana okulula nokuhlela kwesikhathi sangempela. Sebenzisa amazwana uphinde unikeze izinto zesenzo ukuze ugcine ukuhlaziywa kugeleza.
Fika kumininingwane ngokushesha ngokuhlakanipha okwakhelwe ngaphakathi
Izakhi ezisizayo ezifana Nokugcwalisa Okusmathi neziphakamiso ze-formula zikukusiza uhlaziye ngokushesha namaphutha ambalwa. Uphinde uthole imininingwane ngokushesha ngokubuza imibuzo emayelana nedatha yakho ngolimi olulula.
Xhumeka ngokungenazihibe kwamanye ama-Google app
I-Sheets ixhunywe ngokucabanga kwamanye ama-Google app owathandayo, ekulondolozela isikhathi. Hlaziya kalula idatha ye-Google Forms ku-Sheets, noma ushumeke ishadi le-Sheets ku-Google Slides naku-Docs. Ungaphinda uphendule kumazwana ngokuqondile kusukela ku-Gmail uphinde uphrezente kalula ama-spredishithi akho ku-Google Meet.
Nwebela ukuhlanganyela nobuhlakani kumafayela e-Excel
Hlela kalula ama-Microsoft Excel spreadsheet ku-inthanethi ngaphandle kokuwaguqula, kanye nesendlalelo kuzakhi ze-Sheets ezithuthukisiwe zokuhlanganyela nezisizayo ezifana namazwana, izinto zesenzo, Nokugcwalisa Okusmathi.
Yakha izisombululo zangokwezifiso
Sheshisa ukugeleza komsebenzi ngokwakha ama-app ebhizinisi nokwenza kuzenzakalele. Sebenzisa i-AppSheet ukwakha ama-application angokwezifiso ngaphezulu kwe-Sheets, ngaphandle kwekhodi yokubhala. Noma engeza imisebenzi yangokwezifiso, izinto zemenyu, ne-macros nge-Apps Script.
Hlala usebenza ngedatha entsha
Nge-Sheets, wonke umuntu uhlala asebenza kuhlobo lwakamuva lwe-spredishithi. Futhi ngokuhlela okulondolozwe ngokuzenzekelayo kumlando wohlobo, kulula ukuhlehlisa izinguquko noma nanokubona umlando wokuhlela weseli engayodwana ye-spredishithi.
Xhumeka ngokungenazihibe kulwazi olubucayi
Donsela ngaphakathi uphinde uhlaziye idatha kusukela kwamanye amathuluzi owathandayo, afana nedatha yekhasimende kusukela ku-Salesforce. Amakhasimende ebhizinisi angaphinda asebenzisi i-Sheets exhunyiwe ukuhlaziya izigidigidi zamaromu zedatha ye-BigQuery ku-Sheets – ngaphandle kokubhala noma iyiphi ikhodi.
Sisebenzisa izindlela eziphuma phambili zomkhakha zokuvikela ukugcina idatha yakho iphephile, okufaka ukuvikelwa kohlelo olungayilungele ikhompyutha. I-Sheets iphinda idabuke kumafu, okususa isidingo samafayela asendaweni kuphinde kunciphise ingcuphe kumadivayisi akho.
Wonke amafayela alayishwe ku-Google Drive noma asungulwe ku-Sheets abethelwe endleleni kanye nasekuphumuleni.
Imikhiqizo yethu efaka i-Sheets, ivamise ukudlula ekuqinisekisweni kwayo kokuvikela nokobumfihlo kanye nakuzilawuli zokuthobelana.
I-Sheets ithobela ukuzinikela okufanayo okuqinile nokuvikelwa kwedatha njengawo wonke amasevisi ebhizinisi le-Google Cloud.
Asilokothi sisebenzise okuqukethwe kwakho kwe-Sheets ngezinjongo zesikhangiso.
I-Google Sheets iyingxenye ye-Google Workspace
Zami-sheets for work
Finyelela, sungula, uphinde uhlele amaspredishithi akho noma ukuphi — kusukela kunoma iyiphi idivayisi yeselula, ithebulethi, noma ikhompyutha — nanoma ungaxhunyiwe kwi-inthanethi.
Vakashela Igalari Yesifanekiso se-Sheets ukuze uthole okuningi.